Kpido: ọnụ ọgụgụ vidiyo
Ịgụ Oge: 2 nkeji Mmepụta vidio bụ otu n'ime usoro azụmaahịa ndị a na-adịkarị n'okpuru akara ya ma a bịa na ROI. Vidio na-adọrọ adọrọ nwere ike inye ikike na ezi obi nke na-eme ka ụdị gị dị egwu ma na-eme ka atụmanya gị nwee mkpebi ịzụta. Ndị a bụ ụfọdụ ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya metụtara vidiyo: Vidio agbakwunyere na weebụsaịtị gị nwere ike ibute ịrị elu 80% na ọnụego ntụgharị Emails nwere vidiyo nwere ọnụọgụ pịa-96% dị elu ma e jiri ya tụnyere ndị na-abụghị vidiyo ozi ịntanetị Ndị ahịa ahịa vidiyo.
YouTube: Gini bu usoro vidiyo gi n’ebe ahu?
Ịgụ Oge: 2 nkeji Anyị na-elekwasị anya na ọdịiche mgbe niile n'ihe gbasara atụmatụ ịzụ ahịa ahịa dijitalụ nke ndị ahịa anyị. Nchọgharị ọchụchọ abụghị naanị ọwa maka azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa ịchọta ụdị ha na-achọ, algorithms bụkwa akara ngosi pụtara ìhè nke ikike ika na ntanetị. Ka anyị na-enyocha ọdịnaya nke na-adọrọ uche gaa na ika ahụ, anyị na-atụle ọdịnaya dị na saịtị ọ bụla nke ndị asọmpi iji hụ ihe dị iche. Ọtụtụ mgbe, otu n'ime ndịiche a bụ
Azụmaahịa YouTube: Gini mere ọ ka ji dị mkpa!
Wednesday, February 22, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 2 nkeji Anyị kwadoro nzukọ mpaghara nke Podcasters na ọfịs anyị iji kwalite mmụba nke vidiyo na pọdkastị. Ọ bụ mkparịta ụka dị ịtụnanya - site na teknụzụ ọhụụ, nsogbu teknụzụ, na ezigbo usoro vidiyo mmekọrịta. N'ime mkparịta ụka ọ bụla a jụrụ ajụjụ ahụ, anyị kwesịrị ịdị na-eme vidiyo? Kama nke ahụ, ọ bụ ihe niile gbasara otu anyị ga - esi mee vidiyo iji sonyere mgbalị pọdkastị kachasị ụzọ kachasị mma. Dị ka otu pọdkastị, Chris Spangle, ọdịyo na vidiyo
Tọzdee, Febụwarị 18, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ịgụ Oge: <1 nkeji 2015 bụ a ndekọ-agbasa afọ maka ngwaahịa video, na video echiche elu 42% si 2014. Nke ahụ abụghị dum akụkọ, ezie. 45% nke vidiyo vidiyo niile mere na ngwaọrụ mkpanaka. N'ezie, na nkeji iri na ise nke 2015, Echiche vidiyo vidiyo na-eto 6 ugboro karịa vidiyo vidiyo desktọọpụ. Nke a na data ndị ọzọ enyere na Invodo's 2015 Product Video Benchmarks Report nwere niile ziri ezi marketers kwesịrị imejuputa a video atụmatụ… ozugbo. Anyị na-arụkọ ọrụ